အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Avatar ရုပ်ရှင်ထဲက တောင်ထွတ်များရဲ့တည်နေရာ
သဘာဝရဲ့ ဆန်းကျယ်လျှို့ဝှက်နက်နဲစွာ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အလွန်ခမ်းနားလှပစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တောင်တွေ ရှိတဲ့နေရာက တရုတ်ပြည် ဟူးနန့်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Changsha နဲ့ ၂၆၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးတဲ့ ZhangJiaJie အမျိုးသား သစ်တောဥယျာဉ်တွင်းက Wulingyuan သဘာဝရှုမျှော်ခင်း ဧရိယာအတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Avatar ကားထဲမှာ ၄င်း သဲကျောက်တောင်နဲ့ ရှုခင်းများကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသား ဥယျာဉ်အကြောင်းလေးကို စာဖတ်သူများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်...
မျှစ်စို့ပမာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ကျောက်တိုင်များ
တရုတ်တွေရဲ့ ရှုမျှော်ခင်း ပန်းချီကားတွေမှာ အမြဲလိုလိုတွေ့ရတတ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် တောင်ထွတ်တွေဟာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းတောင်များကို ပဉ္စလက်တောင်များလို့လည်း ခေါ်ရလောက်အောင် တိုင်လုံးပုံသဏ္ဍာန် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သဲကျောက်တောင်ကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်. ၄င်းတို့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ Hunan ပြည်နယ်ရှိ ZhangJiaJie အမျိုးသား သစ်တောဥယျာဉ်တွင်းက Wulingyuan သဘာဝ ရှုမျှော်ခင်း ဧရိယာအတွင်းမှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ZhangJiaJie အမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့ ရှုမျှော်ခင်း ဧရိယာဟာ တရုတ်ပြည်တွင်း ခရီးသွားများသာမက နိုင်ငံခြားခရီးသွားများကြားမှာပါ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရသကဲ့သို့ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန်းပြားလှတဲ့ တိုင်လုံး ပုံသဏ္ဍာန် သလင်းကျောက်နဲ့ သဲကျောက်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တာင်ကြီး ၃၁၀၀ခန့်ဟာ ကောင်းကင်ကို ထိုးတက်တော့မည့်ပမာ တည့်မတ်စွာဖြင့် ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေပါတယ်။ ကျောက်တောင်တိုင်းရဲ့ တောင်ထိပ်ဖျားမှာလည်း သစ်ပင်များဟာ ကပ်ကပ်သပ်သပ်ဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြေစွာ ပေါက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတံတားကိုတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ပထမဦးဆုံးတံတားလို့ တင်စားခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကတည်းက သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာမို့ ပထမဦးဆုံးတံတား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့သော ကျောက်သားတိုင်ကြီးများဟာ မြေပြင်အထက် မီတာ ၁၀၀၀ (ပေ ၃၀၀၀ ခန့်) မြင့်မားစွာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ဥယျာဉ်အတွင်းမှာ သဲကျောက်တောင်များသာမက စိမ်းစိုလှပတဲ့ ခြောက်ကမ်းပါးကြီးများ၊ သစ်ပင်များ ထူထပ်စွာ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ မိုးသစ်တောများ၊ ကျောက်စက်ပန်းဆွဲများဖြင့် ခမ်းနားလှတဲ့ ကျောက်လှိုဏ်ဂူများ၊ ပြာလွင်ကြည်လဲ့နေတဲ့ ရေကန်များ၊ ကျောက်တောင်များထက်မှ စီးကျနေသော ရေတံခွန်များ၊ ကျောက်တောင်များကြား ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းကလေးများ၊ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောက်တံတားများ စသည်တို့ဟာ ၂၆၆ စတုရန်းမိုင်ခန့် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း မပျက်မစီး တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် သဘာဝအလှကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလိုသူများ၊ ခံစားလိုသူများအတွက် သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဒေသမှာ မိုးရေချိန်ဟာ တစ်နှစ်ကို ၁၂၀၀ မှ ၁၆၀၀ မီလီမီတာအထိ ရွာသွန်းပြီး ပျှမ်းမျှအပူချိန်ဟာ ၁၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရီတ် ရှိတာကြောင့် ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ၉၇%ဟာ သစ်ပင်များအမျိုးအစားပေါင်း မြောက်မြားစွာဟာ ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးမှာ ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေထက် နှစ်ဆမကအောင် များပြားစွာ ပေါက်ရောက် ရှင်သန်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Zhang Jia Jie အမျိုးသားဥယျာဉ်ဟာ ၁၉၈၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာ ပြင်ပ ခရီးသွားများအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၈၂ခုနှစ်မှသာ အမျိုးသား သစ်တောဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်မှာတော့ UNESCO အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသားသစ်တော်ဥယျာဉ်နဲ့ ပထမဦးဆုံး ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒေသလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥယျာဉ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင် သတ်မှတ်ဝင်ကြေးကို ပေးဆောင်ရပါတယ်။ ဝင်ကြေးဟာ မြန်မာငွေနဲ့ သုံးသောင်း နီးပါး ကျသင့်ပါတယ်။ Zhangjiajie အမျိုးသားသစ်တော ဥယျာဉ်ကြီးဟာ ထူးဆန်းတဲ့ မြေပြင်ပုံသဏ္ဍာန်များနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာမို့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်နယ်မြေ (သို့မဟုတ်) နတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ နယ်မြေ လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ရှေးခတ်ကတော့ ၄င်းဒေသကို အစိမ်းရောင်တောင်ကုန်းဒေသလို့ ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Zhangjiajie လို့ခေါ်တွင်လာပါတယ်။ ဥယျာဉ်တွင်းမှာ လေထုဟာ အောက်ဆီဂျင်ရာခိုင်နှုန်း အလွန်ပေါများစွာ ရှိတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း သင့်တော်ပြီး အနားယူအပန်းဖြေသူများအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
ဥယျာဉ်တွင်းက နွေဦးရာသီရဲ့ သစ်ပင်များ
သဘာဝရဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေ အလှအပတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီနေရာလေးကို တရုတ်ပြည်တွင်း ခရီးသွားမည့်သူများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး ခရီးသွားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သွားလည်သင့်ကြောင်း ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဒီနေရာလေးကို တစ်နေ့နေ့မှာ ရောက်အောင်သွားမဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ် စာရင်းတို့ထားလိုက်ပါတယ်။ ထူးဆန်းလှပတဲ့ ZhangJiaJie ဒေသအကြောင်း ရေးစရာများတာကြောင့် ရေးနေရင်းနဲ့ ပိုစ့်ကသိပ်ရှည်သွားတာကြောင့် ဒီနေရာမှာ တစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်.။ နောက်နေ့မှ ဥယျာဉ်တွင်းက ကျန်တဲ့ လည်ပတ်စရာ နေရာများအကြောင်း ဆက်ရေးပါရစေရှင်။
google and http://www.chinafacttours.com/zhangjiajie/attractions/zhangjiajie-national-forest-park.html
http://www.chinatourmap.com တို့မှ ရယူပါသည်။
32 Responses to “Avatar ရုပ်ရှင်ထဲက တောင်ထွတ်များရဲ့တည်နေရာ”
တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ သဘာဝ တွေပါ...အရမ်းလဲ လှတယ်... အခွင့်ရေးရရင်တော့ သွားလည်ပါဦးမယ်..ချောနဲ့ တောင်ဆုံဦးမလားပဲ...
အောက်မေးရိုး ပြုတ်ကျလောက်အောင် အံ့သြတကြီးဖြစ်သွားပြီ။
တရုတ်ပြည်ထဲမှာဒီလောက်လှတဲ့နေရာကို တခါမှ မကြားဖူး၊ မတွေ့ဖူး ခဲ့ဘူး၊ တိမ်တွေနဲ့ တောင်တွေ ဒွေးရောယှက်တင် နေ,နေကြတာ မှော်ဆန်လိုက်တာ..၊ အလည်သွားချင်တယ်...။း)
ချော ရေ ရှာလည်း ရှာတတ်ပါတယ် ဟုတ်ပ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလိုက်တာ ကျေးဇူးနော်
အိုးးးးး လှလိုက်တာ ချောရေ တကယ်ကို ရင်သပ်ရှူမောပါပဲ။ သွားချင်လိုက်တာ....ကျေးဇူးပါပဲ ချော ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပေးတဲ့အတွက် :))
ချောတို့ကတော့ တကယ်လက်တွေ့သမားပဲနော်။ ချောရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အစိမ်းရောင်တောင်ကုန်းဒေသကို ရောက်ဖူးသွားပြီ။ တောင်ကုန်းတွေကလည်း အချောင်းလိုက်၊ အချောင်းလိုက်ပါပဲလား။ ပန်းလေးက ဘာ
ပန်းလေးလည်း မသိ။ ချယ်ရီပန်းနဲ့ ဆင်သယောင်ယောင်ပဲ။ တောင်ထိပ်တည့်တည့်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး အောက်ကိုငုံ့ကြည့်ရင်ကော။ (အမလေး ဘယ်လိုပြောလိုက်တာပါလိမ့်...ငှက်ဖြစ်နေရင်တောင် မကြည့်ရဲလောက်ဘူး...ကြောက်လွန်းလို့)
သိပ်လှတဲ့ ရှုခင်းတွေပဲ။ သဘာဝတရားက သိပ်ဆန်းကျယ်လွန်းတယ်။
တရုတ်ပြည်လောက်ဆိုတော့ သွားလည်ရ လွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် သွားကြည့်လိုက်ချင်သေးတယ်။
really i love mountains view!
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါလား ချောရေ။ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် တွေ့ဖို့ခဲယဉ်းလှတဲ့ တောတောင် သဘာဝ ရှုမျှော်ခင်းလေးတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ပီတိတွေဝေဖြာခဲ့တယ်။
အလည်တစ်ခေါက်လောက်တော့ အရောက်သွားနိုင်မဲ့ ကံလေးပါတယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲကွယ်။
စိတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြ ချမ်းသာသုခနဲ့ပြည့်ဝပါစေ စာတွေလည်းဆထက်ပွားပြီးရေးနိုင်ပါစေနော်။
ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိလောက်အောင်ကို ထူးဆန်းလှပလွန်းပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ အံ့ဖွယ် ဆန်းကြယ်မှုတွေက လူသားတွေ တီထွင်ထားတဲ့ အရာတွေထက် အများကြီးသာလွန်နေတတ်တာတော့ အံ့သြဖွယ်မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ သဘာဝကိုက ဆန်းကြယ်လွန်းတာကိုး... ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါချောရေ.. ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတောင် ဒီလောက်လှပနေတာ အပြင်မှာများမြင်လိုက်ရရင် လူကပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်မှာသေချာတယ်... တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်တော့လည်း ရောက်ဖူးချင်သား.. သွားဖို့ကံပါခဲ့ရင်ပေါ့.. :))
စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းတွေ ဟာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတာ တွေကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ် လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒါတွေက တရုတ်ပြည် ယူနန်တယ်မှာ ရှိသလို မလေးရှား (ဘော်နီယိုကျွန်း) က ဆရာဝပ် ပြည်နယ်မှာ လဲ ရှိတယ်။ Stone Forest လို့ခေါ်သလို Pinnacle လို့လဲ ခေါ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ မျှဝေ တဲ့ မတွက် အစ်မချော ကို ကျေးဇူးပါဗျား။
ကျနော်ရေးဘူးတဲ့ ဆရာဝပ် အကြောင်း လင့် (ဤကားကြော်ငြာတည်း) :P
ခု​မှ​ပဲေ​ရာ​က်ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ အံြ​သ​ဖွ​ယ် သဘာဝ​ရှု​ခ​င်းေ​တွ​၇ဲ့ေ​န​ရာ​ကို​သိ​ရ​လို့ြ​က​ည့်​ရ​လို့​ ကျေး​ဇူး​ပါ..။
အဲလို ရှုခင်းမျိုးငယ်ငယ်ကတော့ ပိုစတာတွေမှာ မြင်ဖူးတယ်...။ တကယ်လှပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တွေပဲ...။ ကောင်းကင်ကြီးထဲကိုရောက်သွားရသလိုလို ခံစားရတယ်...။ မနေ့ကမှ Avator ကို... အဲဒီအခန်းလေးပြန်ကြည့်နေတာ...။ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး ကျောက်တောင်တွေကြားမှာ ငှက်ပျံကြီးစီးတဲ့ အခန်းလေ...အရမ်းသဘောကျမိတယ်...။
အနုပညာ ဖန်တီးမှုတွေက ရှာရှာဖွေဖွေ လုပ်တတ်တယ်နော် ...
လှလိုက်တာာာ ...အဲ့ထပ်ပိုပြောချင်သေးတာ ကျနော်လည်း အစ်မလိုပဲ အဲ့ဇတ်ကားကြည့်ပြီး တောင်တွေကို သိပ်သဘောကျခဲ့တာ ပုံတွေ စုံ၂လင်၂လေးတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ။
လှလိုက်တဲ့ရှုခင်း ပန်းချီငိုဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ် ထင်တယ်
လှလိုက်တာ ဟိုတစ်နေ့ က ရုံးက အစ်မကြီး သွားလည်တာ အဲနေရာကိုး။။ သူ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလဲ
အလို တောင်ထွတ်တွေနဲ့ တိမ်တွေနဲ့ တွေ့ ရတာ..
ခုမချောပြောတော့ ပိုသွားချင်တယ် အဟုတ်..
အစ်မချောရေ။Avatar ကားထဲက အဲဒီ တောင်တွေနဲ.တိမ်တွေရယ် ငှက်ကြီးစီးတာရယ် အဲဒါတွေက ရင်ခုန်ရလွန်းလို. ။3Dကားကို ၂ခါကြည်.ဖြစ်ပီးတောင် အိမ်မှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပီးထပ်ကြည်.တာ။တိမ်တွေနဲတောင်တွေ ရဲ. ပုံတွေရှာဖွေတင်ပေတဲ. အတွက် သိုင်းကျူး။
Avatar ကို မကြိုက်လို့ အစအဆုံး မကြည့်ဖူးဘူး။ တခန်းတလေပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်။
ချော တင်ပေးထားတဲ့ တောင်တွေကိုတော့ တကယ်ကို သဘောကျတယ်။ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ချင်ပါဘိ။
သဘာဝ အလှတရားတွေက တကယ်ကို ရင်သပ်ရှုမောပဲ ...
Avatar ကားကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီတောင်တွေ တကယ်ရှိမှန်းသိလိုက်ရတော့ အံ့သြသွားတယ်။ တကယ်ကိုပဲ လှလိုက်တာ..ပန်းချီကားတွေကျနေတာပဲ....။
အခုလိုရှာရှာဖွေဖွေဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမ....။း)
Lin Luck Lu said...
ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ ... ကူသြွးပါတယ် ... ခရက်ဒစ် လဲ အမြဲ ပေးပါတယ် ... ရှာရှာ ဖွေဖွေ တွေ ရှာနိုင်တာတော့ တော်တော် ကြီး ကိုချီးကျူးပါတယ် ညီမ ...